पावर प्रेशर कुकर XL उपयोगकर्ता पुस्तिका - म्यानुअल
पावर प्रेशर कुकर XL उपयोगकर्ता पुस्तिका
अक्टोबर 2, 2020 अक्टोबर 2, 2020
18 टिप्पणिहरु पावर प्रेशर कुकर XL प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा
घर » पावर » पावर प्रेशर कुकर XL उपयोगकर्ता पुस्तिका
पावर प्रेशर कुकर XL
मोडेल: मोडेल # PPC770
महत्वपूर्ण: तपाईंले यस सम्पूर्ण म्यानुअल राम्ररी पढिसके पछि यो प्रेशर कुकरको प्रयोग नगर्नुहोस्। वारेन्टी जानकारी भित्र।
बधाई छ ...
तपाई आविष्कार गर्दै हुनुहुन्छ कि धेरै अन्य खाद्य प्रेमीहरूले बर्षदेखि थाहा पाएका छन्। साधारणतया, त्यो खाना राम्रोसँग तयार पारिएको खाना पकाउने विधिमा स्वाद राम्रो हुन्छ र छिटो खाना पकाउँदछ पारंपरिक स्टोभटप विधिहरू प्रयोग गरेर बनाएको खाना भन्दा।
दशकौंसम्म, हाम्रो पाक डिजाइन डिभाजनले विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगको लागि केहि सबैभन्दा उपयोगी र लोकप्रिय भान्छा उपकरणहरू सिर्जना गरेको छ। पावर प्रेशर कुकर XL our हाम्रो प्रतिष्ठित लाइनमा नवीनतम छ।
हामीले धातु र कुकिंग सतहहरूको सही संयोजनको परीक्षण र सिद्ध गरेका छौं
र डिजिटल टेक्नोलोजीको ग्यारेन्टी हुन्छ तपाईंलाई सम्पूर्ण परिवारबाट खाजा राइमहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। एक पटक "एक स्पर्श" प्रि-सेट प्रणालीसँग परिचित भएपछि, तपाईले पाउनुहुनेछ कि धेरै मनपर्ने पारिवारिक व्यंजनहरू समयको एक अंशमा पूर्ण रूपमा पकाउन सकिन्छ।
सिल गरिएको कुकि cha कक्षले तातो र दबाबको निर्माण गर्दछ। परिणाम ... अधिक स्वाद खाना भित्र लक हुन्छ र कम उर्जा छोटो पकाउने समयमा बर्बाद हुन्छ। "सिल गरिएको" खाना पकाने प्रक्रियाले कूलर किचेनहरू र सजिलो सफा सफाको लागि बनाउँदा "जालमा पार्ने" गर्मी गर्दा गडबडी स्टोभटप स्पिलहरू हटाउँदछ।
पावर प्रेशर कुकर एक्सएल you ले तपाईंलाई खाना खाने टेबलको वरिपरि धेरै वर्षको स्वादिष्ट परिवारको खाना र सम्झनाहरू प्रदान गर्दछ… तर तपाईंले सुरु गर्नु अघि यो सम्पूर्ण मेनुअल पढ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं यसको सञ्चालन र सावधानीहरूको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनुहुन्छ।
विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्दा, आधारभूत सुरक्षा सावधानीहरू निम्न सहित पछ्याउनु पर्छ:
ध्यानपूर्वक सबै निर्देशनहरू पढ्नुहोस् र पालना गर्नुहोस्।
यो उपकरण कम शारीरिक, संवेदी वा मानसिक क्षमता, वा अनुभव र ज्ञान को अभाव संग व्यक्ति द्वारा प्रयोग गर्न को लागी गरीएको छैन, जबसम्म तिनीहरू जिम्मेवार व्यक्तिको निगरानीमा छैनन् वा उपकरण प्रयोग गर्न उचित निर्देशन दिइएको छैन। यो उपकरण बच्चाहरू द्वारा प्रयोगको उद्देश्यले गरिएको छैन।
सधैं निश्चित गर्नुहोस् फ्लोट भल्भ सही प्रयोग गर्नु अघि राम्रोसँग छ। गलत असेंब्लीले कुकरलाई निर्माणको चापबाट रोक्न सक्छ वा ढक्कनको छेउबाट स्टीम बाहिर आउन दिन्छ (असेंब्लीको लागि पृष्ठ See हेर्नुहोस्)।
तातो सतहहरु छुनुहोस्। ह्यान्डल वा नोब्स प्रयोग गर्नुहोस्।
विद्युतीय झटका बिरूद्ध रक्षा गर्न डुब्न वा डोरी वा पानी वा अन्य तरलमा प्लगहरू कुल्नुहुन्न।
यो उपकरण बच्चाहरू द्वारा कहिले पनि संचालित हुँदैन र विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ जब इकाई तिनीहरूको उपस्थितिमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ।
आउटलेटबाट अनप्लग गर्नुहोस् जब प्रयोगमा छैन र सफा गर्नु अघि। भागहरू राख्नु वा बन्द गर्नु अघि चिसो हुन अनुमति दिनुहोस्।
बिग्रेको डोरी वा प्लग वा उपकरणको खराबी पछि वा कुनै पनि तरिकाले बिग्रिएको कुनै पनि उपकरण अपरेट नगर्नुहोस्। परीक्षा, मर्मत वा समायोजनको लागि नजीकको आधिकारिक सेवा सुविधामा उपकरण फर्काउनुहोस्।
कुनै पनि अनुलग्नकहरू वा भाँडाहरू प्रयोग नगर्नुहोस् जुन सिफारिस वा निर्माता द्वारा आपूर्ति गरिएको थिएन। निर्माता द्वारा प्रयोगको लागि सिफारिश गरिएको अनुलग्नकहरूको प्रयोगले व्यक्तिगत चोटपटक गम्भीर खतरनाक अवस्था निम्त्याउँदछ।
घर बाहिर प्रयोग नगर्नुहोस्।
तालिका वा काउन्टरको किनारामा डोरीलाई झुन्ड्न नदिनुहोस्, वा तातो सतहहरू छुनुहोस्।
तातो ग्यास वा इलेक्ट्रिक बर्नरमा वा नजिक नजानुहोस्, वा तप्त भट्टीमा।
तातो सावधानी प्रयोग गर्नुपर्नेछ जब तातो तेल वा अन्य तातो तरल पदार्थ सहितको उपकरणलाई सार्दा।
सँधै प्लगलाई उपकरणमा पहिले संलग्न गर्नुहोस्, त्यसपछि भित्ता आउटलेटमा प्लग कर्ड। विच्छेदन गर्न, कुनै पनि नियन्त्रण "बन्द" मा सेट गर्नुहोस्, त्यसपछि भित्ते आउटलेटबाट प्लग हटाउनुहोस्।
यसको उद्देश्ययुक्त प्रयोग बाहेक अरू कुनै चीजको लागि उपकरण प्रयोग नगर्नुहोस्।
यो उपकरण दबाब अन्तर्गत कुक। अनुचित प्रयोगको परिणामस्वरूप स्केल्डिंग चोट लाग्न सक्छ। अपरेटिंग अघि निश्चित इकाई राम्रोसँग बन्द छ। प्रयोगका लागि निर्देशनहरू हेर्नुहोस्।
भित्री भाँडा (चित्रण २, पृष्ठ)) मा MAX लाइन माथिको इकाई कहिल्यै न भर्नुहोस्। जब खाना पकाउने सुचस चावल वा सुका गेडाहरूका बखत विस्तारित खाद्य पदार्थहरू प्रयोग गर्दा, ती चीजहरूलाई "प्रेशर पकाउने" को लागि निर्देशन पछ्याउनुहोस्, र औंलाको नियमको रूपमा, "आधा बाटो" बिन्दुको माथि एकाई भर्नुहुन्न। अधिक भरिने अवरोध पैदा गर्न सक्छ, अधिक दबाव को विकास गर्न अनुमति दिदै। प्रयोगका लागि निर्देशनहरू हेर्नुहोस्।
सचेत रहनुहोस् कि केहि खाद्य पदार्थहरू, जस्तै एप्पलस, क्रानबेरी, मोती जौ, दलिया वा अन्य अनाज, स्प्लिट मटर, चाउचाउ, मकरोनी, वायब्रु, र स्पेगेटी, फोम, फ्रुथ, स्पटर, र एन्डलग प्रेशर रिलीज उपकरण (स्टीम भेन्ट) गर्न सक्छन्। समस्याहरूबाट बच्न यी आईटमहरू प्रयोग गर्ने विधिहरू सावधानीपूर्वक पछ्याउनुपर्दछ।
प्रयोग गर्नु भन्दा अगाडी नै क्लगहरूको लागि सँधै प्रेशर रिलीज यन्त्रहरू जाँच गर्नुहोस्।
इकाई शीत नभएसम्म र सबै आन्तरिक दबाव जारी नगरेसम्म पावर प्रेशर कुकर एक्सएल नखोल्नुहोस्। यदि इकाई खोल्न गाह्रो छ भने, यसले कुकर अझै पनी प्रेशर भएको संकेत गर्दछ - यसलाई खोल्न जोड नगर्नुहोस्। कुकरमा कुनै दबाब खतरनाक हुन सक्छ। प्रयोगका लागि निर्देशनहरू हेर्नुहोस्।
तेलको साथ फ्राइ pressure प्रेसरको लागि यो प्रेशर कुकर प्रयोग नगर्नुहोस्।
यो उपकरण एक3prong, ग्राउन्ड, 120V बिजुली आउटलेट मात्र संग प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। कुनै पनि अन्य बिजुली आउटलेट प्रयोग नगर्नुहोस्।
पावर प्रेशर कुकर एक्सएलले यसको अपरेशनमा अत्यधिक तातो र स्टीम उत्पन्न गर्दछ। यसको अपरेशनको बेला आगो, जलेको र अन्य व्यक्तिगत चोटबाट बच्न सबै आवश्यक सावधानीहरू अपनाउनु पर्दछ।
जब अपरेशनमा पावर प्रेशर कुकर एक्सएललाई माथि र तल सहित सबै पक्षहरूमा पर्याप्त हवा ठाउँ आवश्यक पर्दछ। कुनै पनि ज्वलनशील पदार्थ जस्तै पकवान तौंली, कागज तौलिया, पर्दा, कागज प्लेटहरू, आदि नजिक कहिल्यै इकाई संचालन नगर्नुहोस्।
सँधै पर्खालको आउटलेटमा इलेक्ट्रिकल कर्ड सिधा प्लग गर्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको एक्स्टेन्शन कर्डको साथ यो एकाई कहिले प्रयोग नगर्नुहोस्।
जो कोहीले पनि यो म्यानुअलमा समावेश सम्पूर्ण अपरेटिंग र सुरक्षा निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पढेका छैनन र बुझ्दैनन् भने यो उपकरण सञ्चालन वा सफा गर्न योग्य छैनन्।
यदि यो एकाइ खस्छ वा गल्तीले पानीमा डुबायो भने, यसलाई तुरून्त भित्ते आउटलेटबाट अनप्लग गर्नुहोस्। पानीमा नपुग्नुहोस्!
यस उपकरणलाई अस्थिर सतहमा अपरेट नगर्नुहोस्।
यदि यो उपकरण प्रयोगको बेलामा खराबी गर्न थाल्छ भने, तुरुन्तै कर्ड अनप्लग गर्नुहोस्। एक malpunctioning उपकरण मर्मत गर्न को लागी प्रयोग वा प्रयास नगर्नुहोस्!
कहिले पनि फोर्स पावर प्रेशर कुकर XL खोल्नुहोस्। यदि तपाईंलाई पावर प्रेशर कुकर XL खोल्न आवश्यक छ भने, "KEEP WARM / CANCEL" बटन थिच्नुहोस् र चिम्टा वा कुनै भान्छाको उपकरण प्रयोग गरी वाल्चर प्रेस वाल्भलाई ध्यानपूर्वक ओपेन स्थितिमा घुम्नुहोस् (छवि 4, पृष्ठ)) पूर्ण रूपमा बिल्डिंगको दबाब जारी गर्न। कुकर भित्र। निश्चित गर्नुहोस् कि सबै स्टीम कुकरबाट नष्ट भयो। ध्यानपूर्वक खोल्नको लागि ह्यान्डललाई दक्षिणावर्त घुमाउनुहोस्। कुनै पनि बाँकी तातो वा स्टीमको साथ छालाको सम्पर्कबाट बच्न जहिले पनि तपाईंबाट ढाँचा हटाउनुहोस्।
सावधानी: इलेक्ट्रिक शकको जोखिम कम गर्न, केवल हटाउने कन्टेनरमा कुक। आवास वा पानीमा डुबाउने नगर्नुहोस्। प्रयोग गर्नु अघि, भित्री भाँडोको तल्लो र हीटर प्लेटको सतह सफा गर्नुहोस् ... भित्री भाँडो घुसाउनुहोस्, यसलाई अलिकता घडीको दिशामा र उल्टो दिशामा बदल्नुहोस् जबसम्म तपाईं योटर प्लेटमा सहि बसिरहनुभएको निश्चित हुनुहुन्न। त्यसो गर्न असफल भएमा उचित सञ्चालन रोक्दछ र युनिटलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।
सावधान हट सर्फेस। यो उपकरणले गर्मी पैदा गर्छ र प्रयोगको बखत स्टीमिंग। उचित सावधानी अपनाउनु पर्दछ व्यक्तिगत चोट, आगो र सम्पत्तीमा हुने नोक्सानीको जोखिमलाई रोक्न।
यी निर्देशनहरू बचत गर्नुहोस् - केवल घर प्रयोगका लागि।
सर्ट कोर्ड निर्देशहरू
एक छोटो विद्युत आपूर्ति कोर्ड जोखिम कम गर्नको लागि प्रदान गरिएको छ जो एक लामो कर्डमा अल्झिएको वा ट्रिपिंगबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई कम गर्दछ। यस उत्पादनको साथ एक्स्टेन्सन कर्ड प्रयोग नगर्नुहोस्।
यदि बिजुली सर्किट अन्य उपकरणहरूको साथ अधिक भार छ भने, तपाईंको उपकरण राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ। यो समर्पित इलेक्ट्रिकल सर्किटमा अपरेट गरिनु पर्छ।
NOTE: यस उत्पादनलाई आधार बनाउनु पर्छ। यदि यो खराबी वा बिग्रिनु पर्छ भने, ग्राउन्डि electricले विद्युतीय झटका जोखिम कम गर्न विद्युत प्रवाहको लागि कम्तिमा प्रतिरोधको मार्ग प्रदान गर्दछ। यो उत्पादन एक उपकरण ग्राउन्डि conduct कन्डक्टर र एक ग्राउन्डि plug प्लग भएको एक डोरीले सुसज्जित छ। प्लग एक उपयुक्त आउटलेटमा प्लग इन हुनुपर्दछ जुन राम्रोसँग स्थापना गरिएको हो र सबै स्थानीय कोडहरू र अध्यादेशहरूको आधारमा ग्राउन्ड गरिएको छ।
यस निर्देश सुरक्षित गर्नुहोस् घरको लागि मात्र प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँको पावर प्रेशर कुकर XL मा डिजिटल प्रदर्शन कम टेम्प कुकिंग, स्टीव,, स्टीमि and र अधिक सहित धेरै विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
खाना पकाउने समय र प्रेशर स्तरहरू कुनै पनी विधि वा व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुरूप मिलाउन सकिन्छ। कुकि cycle चक्र पूरा भएपछि, एकाई स्वचालित रूपमा KEEP WARM मोडमा सर्नेछ।
डिजिटल प्रेशर कुकिंगले २ 248 ओ एफ (१२० ओ सी) सम्मको तापक्रमलाई अधिक बाँझो र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्दा पारम्परिक खाना पकाउने विधिहरूको तुलनामा प्रयोग गर्दछ।
प्रेशर भेन्ट सुविधाले तपाईंलाई द्रुत र चाँडो कम दबाव दिन अनुमति दिन्छ। त्यसो गर्न होसियारीपूर्वक प्रेस वाल्भलाई भेन्ट स्थितिमा टेongs्ग्स वा अर्को भान्छाको उपकरण प्रयोग गरेर घुमाउनुहोस्। खुला हात कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्।
चेतावनी: यस प्रक्रियाको अवधिमा तपाईंको छालालाई कुनै पनि सम्पर्कबाट उम्क्ने स्टीमबाट जोगाउनुहोस्।
स्टीम मोडले खाना पकाउने तरललाई आन्तरिक भाँडोमा उमालेको लागि केही मिनेटमा पकाउँदछ, स्टीमिंग र अनन्त विविध प्रकारका खाद्य पदार्थहरू पकाउनको लागि।
KEEP WARM मोडले पकाएको खानालाई लामो समयको लागि तातो राख्छ। KEEP WARM मोडमा राखिएको खाना4घण्टा भन्दा बढि अवधिहरूमा उनीहरूको राम्रो स्वाद र बनावट हराउन सक्छ।
निर्मित सुरक्षा सुविधाहरू
ढक्कन सुरक्षा उपकरण: ढक्कन ठीक ढ closed्गले बन्द गरिएको छैन र सबै प्रेस जारी नगरे सम्म ढक्कनलाई खोल्न रोक्दछ भने दबाव निर्माण रोक्दछ।
दबाव र तापमान सेन्सर नियन्त्रणहरू: गर्मी र दबावलाई पनि कायम राख्नुहोस् स्वचालित रूपमा विद्युत आपूर्ति सक्रिय वा निष्क्रिय गरेर।
"ब्याक-अप" सुरक्षा रिलीज भल्भ: यदि तापक्रम / प्रेशर सेन्सर उपकरण खराबी, अधिकतम सेटिंग भन्दा परे निर्माण गर्न दबाव पैदा गर्दछ, "ब्याक-अप" स्वचालित रूपमा "लात मा" र निर्मित दबाव छोड्नेछ।
"क्लग प्रतिरोधी" सुविधा: खानालाई स्टीम रिलिज पोर्ट रोक्नबाट रोक्दछ।
"स्प्रिंग लोड" सुरक्षा दबाव रिलीज: माथि सूचीबद्ध सबै सुरक्षा सुविधाहरू असफल हुनुपर्दछ, तातो तत्वको मुनि अवस्थित यस "वसन्तले भरिएको" उपकरणले आन्तरिक भाँडोलाई स्वचालित रूपमा तल झार्नेछ, यसले रबर ग्यासकेटबाट स्वत: विभाजित हुन्छ। यसले भाप र दबावलाई खतरनाक अवस्थाबाट टाढा स्वचालित रूपमा भाँडो ढक्कनको वरिपरि भाग्न सक्षम गर्दछ।
तापमान "कट अफ" उपकरण: यदि एकाई खराबीको कारण र आन्तरिक तापक्रम "सेफ" सीमा भन्दा बढि बढ्दो कारणले यो उपकरणले विद्युत आपूर्ति काट्ने छ र स्वत: रिसेट हुँदैन।
पावर प्रेशर कुकर XL पार्ट्स र एक्सेसरीजहरू
महत्वपूर्ण: तपाइँको पावर प्रेशर कुकर XLTM माथि देखाइएको अवयवहरू सहित पठाइएको छ। प्रयोग गर्नु अघि सबै चीज ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि अंश हराइरहेको छ वा क्षतिग्रस्त छ भने यस उत्पादन र सम्पर्क शिपरको उपयोग नगर्नुहोस् मालिकको म्यानुअलको पछाडि कभरमा अवस्थित ग्राहक सेवा नम्बर प्रयोग गरी।
सामान्य अपरेटिंग निर्देशन
पहिलो प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले
पहिलो पटक पावर प्रेशर कुकर XL प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले, भित्री साबुन पानीले इनर पट, बिर्को र रबर गस्केट (# १ मुनिको चित्र) धुनुहोस्। सफा पानीले कुल्ला र राम्रोसँग सुक्नुहोस्।
रबर गस्केटको सही फिटिंग सुनिश्चित गर्न, भित्री भाँडो भर्नुहोस् (# २ मुनिको चित्र) लगभग २/2 पूर्ण पानीले कुकरमा लिड राख्नुहोस् (# below मुनिको चित्र), त्यसपछि प्रेसर वाल्भलाई लक स्थितिमा घुमाउनुहोस् र १० मिनेट को लागी CANNING मोडमा चलाउनुहोस्। जब चक्र पूरा हुन्छ, चिम्टा वा अर्को भान्साकोठा उपकरण प्रयोग गरेर, प्रेसर वाल्भलाई ध्यानपूर्वक खुला स्थितिमा घुमाउनुहोस् (# below मुनिको चित्र) सबै दबावबाट उम्कन अनुमति दिन्छ। उपकरण कोठाको तापक्रममा चिसो हुन दिनुहोस्। पानी खन्याउनुहोस्। कुल्ला र तौंली भित्रि भाँडा सुख्खा। पावर प्रेशर कुकर XL अब प्रयोगको लागि तयार छ।
१. ढक्कन (अन्डरसाइड) रबर ग्याकेट
उचित सफाईको लागि रबर गस्केट हटाउनु पर्छ। लिडको मुनि अवस्थित पुल ट्याब प्रयोग गरेर, गसकेट समातेको पोट लिड लाइनर हटाउनुहोस्। सफा गरिसकेपछि, गास्केटलाई लिड लाइनरमा पुन: संलग्न गर्नुहोस् र फिर्ता फिर्ता स्नैप गर्नुहोस्।
२ भित्री भाँडो
Id. कुकरमा ढक्कन राख्दै
भित्री भाँडो एकाईमा राख्नुहोस्। MAX रेखा माथि भित्री पोट कहिले लोड नगर्नुहोस्। भित्री भाँडो घुमाउनुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि यो ठीकसँग बसेको छ।
कुकरमा ह्यान्डल र रिसेस्ड भल्भको साथ ठाउँमा राख्नुहोस् (चित्र। ए) "१०:०० बजे" स्थिति औंल्याए। ढिक्का घडिको उल्टो दिशामा घुमाउनुहोस् जब सम्म तपाईं एक क्लिक महसुस गर्नुहुन्न।
HOT LID WARNING: कालो कम्पाउट ह्याण्डल प्रयोग गर्नुहोस् मात्र जब idडकन खोल्नुहोस्। स्टेनलेस चोरी भागहरू धेरै तातो हुन्छन् र तपाईंको हातहरू जलाउन सक्छ।
Press. दबाव भल्भ
चेतावनी: गम्भीर चोटपटकबाट बच्नुहोस् ... कुनै पकाउने प्रक्रिया पछि खुला स्थितिमा प्रेशर भल्भ सेट गर्न कहिल्यै आफ्नो हात प्रयोग नगर्नुहोस्। चिमनी वा केही अन्य भान्छा उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
कन्ड्सेन्सन कलेक्टरले सजिलैसँग कुनै नमी लिन्छ जुन ड्रप हुन सक्छ जुन तपाईंको पावर प्रेशर कुकर एक्सएल प्रयोग गर्दा। साधारण रूपमा पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस् र कुकरको पछाडि च्यानलहरूमा कलेक्टरलाई धकेल्नुहोस्। खाली र प्रत्येक प्रयोग पछि सफा गर्नुहोस्।
MAX रेखा माथि भित्री पोट कहिले लोड नगर्नुहोस्। भित्री भाँडो घुमाउनुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि यो तापक्रम प्लेटमा राम्रोसँग बसेको छ।
सँधै निश्चित हुनुहोस् प्रेशर भल्भ नि: शुल्क फ्लोटिंग र कुनै पनि अवरोधहरूबाट खाली छ।
एसी कोर्डको एकाइको आधारमा संलग्न गर्नुहोस् र त्यसपछि AC Cord लाई समर्पित १२०V वाल आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस्।
ढक्कन खुल्नु अघि स्टीम र दबाब कुकरबाट पूर्ण रूपमा छोडिनु पर्छ। यो गर्न, ध्यानपूर्वक अघिल्लो पृष्ठमा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
चेतावनी: यस प्रक्रियाको बखत पलायन ढक्कनको वा स्टेनलेस स्टीलको भागबाट उम्कने कुनै पनि सम्पर्कलाई वेवास्ता गरेर तपाईंको छालाको रक्षा गर्नुहोस्।
Lid मा हल्का तल थिच्नुहोस् र Lid प्रतिरोध पूरा नभएसम्म घडीको दिशा बदल्नुहोस् ... होसियारीसाथ माथि उठाउनुहोस् र एकतिर राख्नुहोस्। तातो इकाई सतहहरू र ड्रिपिंग तरल पदार्थको परिणामस्वरूप व्यक्तिगत चोटबाट बच्नुहोस्।
नोट: नुस्खा पुस्तिकामा देखाइएको "कुक समयहरू" मा पकाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले एकाईलाई दबाब दिन आवश्यक थप समय समावेश गर्दैन। पूर्ण दबावमा १ 17 मिनेट लिन सक्दछ।
केयर र क्लिनिंग
सुरक्षा उपकरणहरू सफा गर्दै: गस्केटको अतिरिक्त, पावर प्रेशर कुकर एक्सएलमा रहेका अन्य सुरक्षा उपकरणहरू पनि प्रत्येक प्रयोग पछि सफा गर्नुपर्दछ।
दबाब भलभ: प्रेशर भल्भ हटाउनका लागि, केवल तान्नुहोस् र भल्भ यसको वसन्त लक संयन्त्रबाट रिलिज हुनेछ। हल्का डिटर्जेंट लागू गर्नुहोस् र यसलाई तातो पानीको मुनि धुनुहोस्। सफा गरिसकेपछि, जाँच गर्नुहोस् कि भित्री स्प्रि -्ग-लोड भाग यसमा तल थिच्न स्वतन्त्र रूपमा जान्छ। प्रेस वाल्भलाई फेरि ठाउँमा राखेर वसन्त-भारित मेकानिमेसनमा तल राख्नुहोस्। यस उपकरणलाई थोरै मर्मत आवश्यक छ। यसमा कुनै उपयोगकर्ता सेवा पुर्‍याइएको अंश छैन। यसलाई आफै मर्मत गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। योग्य मर्मत जानकारीको लागि ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्नुहोस्।
सफा गर्नु: प्रयोग पछि, युनिट अनप्लग गर्नुहोस् र सफा गर्नु अघि पूर्ण रूपमा चिसो हुन दिनुहोस्। पावर प्रेशर कुकर XL खाना पकाउने वा खाना पकाउने अवशेषको कारण हुने दागबाट बच्न प्रत्येक प्रयोग पछि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्दछ।
एक गर्म पावर प्रेशर कुकर XL मा तपाईंको कउल्ड पानी नलगाउनुहोस्।
नोट: यस पावर प्रेशर कुकर XL को सुरक्षित अपरेशन सुनिश्चित गर्न, प्रत्येक प्रयोग पछि सफाइ र मर्मतसम्भार निर्देशनहरूको कडाईका साथ पालन गर्नुहोस्, खानाको एक सानो बिट (जस्तै धान वा मटरको शेल) इकाईमा रहनुपर्दछ, यसले सुरक्षा उपकरणहरू रोक्न सक्दछ। पछि प्रयोगको समयमा अपरेटिंगबाट।
महत्वपूर्ण: जहिले पनि प्रेशर भल्भ हटाउनुहोस् र खाना पकाउने प्रक्रियाको बखत हुन सक्ने कुनै पनि अवरोध हटाउन पिनको साथ उद्घाटन सफा गर्नुहोस्। यो प्रत्येक प्रयोग पछि गर्नु पर्छ। हटाउन योग्य कुकि cooking पोट र लिड सफाईको लागि डुबाउनेहरू हुन्। पकाउने भाँडा र तताउँदै तातो पानीमा बिर्सन कुल्नुहोस्। सफाईको लागि केवल हल्का तरल डिटर्जेंट र सफ्ट कपडा, स्पन्ज वा नायलन स्क्रबर प्रयोग गर्नुहोस्। घर्षण पाउडर, सोडा वा ब्लीचको बाइकार्बोनेट प्रयोग नगर्नुहोस्। Scouring प्याड को उपयोग नगर्नुहोस्।
पछाडि प्रत्येक पनी एक सफ्टवेयर, ड्याम्प कपडा वा स्पोन्गको साथ प्रयोग गरेपछि, सबै खाद्यान्न पुन: प्राप्ति हटाइनेछ।
पानीमा आधार नलिनुहोस्
ढक्क्खा सफा गर्दा, रबर गस्केट (पृष्ठ,, चित्र # १) हटाउनुपर्नेछ र स्पन्ज वा नरम कपडा र न्यानो, साबुन पानीले अलग धुनु पर्छ।
अनप्लग गर्नुहोस् र पावर प्रेशर कुकर XL सफा गर्नु अघि कोठाको तापक्रममा चिसो दिनुहोस्।
न्यानो, साबुन पानीले हटाउन सकिने भाँडा माझ्नुहोस् र नरम कपडा वा स्पन्जले सफा गर्नुहोस्। सफा पानी र तौंली सुख्खा संग कुल्ला।
रबर ग्यास्केट सधैं राम्रोसँग लिडको अन्डरसाइडमा स्थित हुनुपर्दछ। यो सफा, लचिलो र फाटेको छैन भनि निश्चित गर्न समय समयमा जाँच गर्नुहोस्। यदि बिग्रिएको छ भने, यो एकाई प्रयोग नगर्नुहोस्।
एउटा नम नरम कपडा वा स्पन्जको साथ दर्पण समाप्त बाहिरी आवासलाई सफा गर्नुहोस् (ग्लास सफा गर्नेले हाउजि aलाई एक उज्ज्वल चमक दिन्छ)।
कठोर रसायनिक डिटर्जन्ट कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस्, पैड वा पाउडरहरू कुनै पनि भाग वा अवयवहरूमा।
जहिले पनि जाँच गर्नुहोस् कि प्रेशर भल्भ र फ्लोट भल्भ राम्रो कार्य क्रममा छ र मलबेस रहित छ।
डिजिटल कन्ट्रोल पैनल
पावर प्रेशर कुकर एक्सएलमा सात आधारभूत खाना पकाउने मोडहरू छन् जुन एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ वा परिणामहरूको असीम विविधताका लागि संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जब युनिट पहिलो पटक प्लग हुन्छ, 0000 LED प्रदर्शनमा देखा पर्नेछ। जब खाना पकाउने प्रक्रिया चयन गरिन्छ, जस्तै CANING / PRESERVING, पूर्वनिर्धारित समय एलईडी विन्डोमा seconds सेकेन्डको लागि प्रदर्शित हुनेछ। तब घुमाउने प्रभाव स्क्रिनमा देखा पर्नेछ यसले संकेत गर्दै जुन भवन निर्माण दबाव हो। एक पटक दबाव बनाइए पछि, घुम्ने प्रभाव अन्त्य हुनेछ र प्रदर्शनले समय गणना गर्न थाल्नेछ। जब प्रक्रिया समाप्त हुन्छ, एकाई बीप हुन्छ र रद्द नभएसम्म KEEP WARM मोड प्रवेश गर्दछ।
कुक समय चयनकर्ता बटन: जब विशिष्ट खाना पकाउने प्रोग्राम चयन गरिन्छ, एकाईले एलईडी विन्डोमा पूर्वनिर्धारित समय प्रदर्शन गर्दछ र एलईडी विन्डो मुनिको "फूड: द्रुत" सूचक उज्यालो हुन्छ। यदि तपाइँको बनावट वा व्यक्तिगत स्वादलाई "मध्यम" वा "राम्रो" नतीजाहरू चाहिन्छ, तपाइँ कुक समय चयनकर्ता बटन थिचेर ती विकल्पहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, कुक समय चयनकर्ता बटन राइस पकाउँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ राइट, ब्राउन वा वन्य प्रकारकाका लागि उत्तम कार्यक्रम छनौट गर्न।
NOTE: तपाइँ समय समायोजन बटन चयन गरेर प्रि-प्रोग्राम गरिएको समय लाई ओभरराइड गर्न सक्नुहुन्छ।
महत्वपूर्ण: कुनै पनि समारोह तुरून्त रोक्न सकिन्छ CANCEL बटन चयन गरेर।
यदि त्यहाँ बाफहरू बाहिर आउँदैछन् र ढक्कनको माथि रहेको वाल्भ वाल्भ लक स्थितिमा छ भने, ढक्कन बसिएको छैन। यो कहिलेकाँही हुन्छ जब एकाई नयाँ हुन्छ। यदि गस्केट स्थानमा छ भने ढकलाई तल धकेल्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले लिडलाई छाप लगाउनु पर्छ र स्टीम बाहिर आउन बन्द गर्नुपर्दछ। फ्लोट भाल्भ सही रूपमा भेला भएको छ भनेर निश्चित हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। गलत असेंब्लीले स्टीमलाई छेउछाउबाट बाहिर आउन सक्छ वा भवनबाट दवाव रोक्न सक्छ। सिलिकन ग्यासकेट लिडलाई भेट्दा फ्लोट भाल्भ खाली र स्वतन्त्र रूपमा मात्र रोकिने सक्षम हुनुपर्दछ। कन्डेन्सेशन कन्डक्टरमा देखा पर्न यो सामान्य छ। असेंब्लीको लागि तल दृष्टान्त हेर्नुहोस्।
१. फ्लोट भल्भको टाउको समात्नुहोस् र पन्सिल वा कुनै अन्य स्लिम उपकरणको साथ एकाइको ढक्कनमा प्वालमा अन्तमा घुसाउनुहोस्। फ्लोट भल्भको टाउको कडा गरी समात्नुहोस् र लिडलाई अन्डरसाइडमा उल्टाउनुहोस्।
२. फ्लोट भल्भको फ्लुन्ट टुप्पा ढक्कनको भित्री भागबाट टाढा राख्नुपर्दछ।
The. सिलिकॉन गस्केटलाई फ्लोट भाल्भको फ्लुटेड छेउमा राख्नुहोस् ताकि यो ग्रूवमा बस्दछ।
The. फ्लोट भल्भलाई माथि र तल स्वतन्त्र रूपमा मात्र रोक्नको लागि सक्षम हुनुपर्दछ जब सिलिकॉन ग्यासकेट लिड भेट्छ।
दबाब पकाउने चार्टहरू
NOTE: सबै दबाब पकाउने मोडहरूलाई केहि फारममा तरलको थप आवश्यक पर्दछ
(पानी, स्टक, आदि)। जबसम्म तपाईं दबाब पकाउने प्रक्रियासँग परिचित हुनुहुन्न,
तरल थप थप सुझावहरूको लागि सावधानीपूर्वक पालन गर्नुहोस्। माथिल्लो भित्री भाँडो कहिल्यै न भर्नुहोस्
MAX लाइन। सँधै प्रेसर वाल्भ कम दबावमा चाँडो प्रयोग गर्नुहोस्।
के पावर प्रेशर कुकर XL यसमा पर्छ?
इस्पातको प्रकार कस्तो हुन्छ?
तपाईं कसरी एकाइलाई असन्तुष्ट / निराकरण गर्नुहुन्छ?
यस पुस्तिकाको पृष्ठ on मा रेखाचित्र हेर्नुहोस्।
किन आउँदैन त?
यो भित्र आउने छ यदि त्यहाँ कुनै दबाब थिएन।
अपराधी समय के हो?
प्रत्येक कुकि mode मोडमा पूर्वनिर्धारित समय हुन्छ जुन तपाईले चाहानु भएको मोड बटन छनौट गर्ने बित्तिकै देखा पर्दछ। डिफल्ट समय "मिनेट काउन्ट डाउन" घडी सुरु हुनुभन्दा पहिले, एकाई पहिले उपयुक्त दबाव र / वा त्यो मोडको लागि तापक्रममा पुग्नै पर्छ।
पूर्ण दबावमा पुग्नको लागि युनिटको लागि र ककक समय काउन्टको लागि काउन्ट डाउन सुरु गर्न कति समय लाग्छ?
१ 17 मिनेट सम्म।
के तपाईं कक समय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो भन्दा बढि सेटिंग छ?
हो! पृष्ठ ON मा चार्ट हेर्नुहोस्।
के तपाईं घरमा छोड्न सक्नुहुन्न?
के तपाईं डेफ्रोस्टिंग बिना स्थिर खाद्य पदार्थ राख्न सक्नुहुन्छ?
हो, यसका लागि अतिरिक्त १० मिनेट थप्न सम्झनुहोस्
फ्रिज गरिएको मासु
दबाव क्यानिंग गाइड
महान खाना कुनै पनि समय ...
क्यानिंग प्रक्रियाले तपाईंलाई तपाईंको परिवारको मनपर्नेहरू ताजा र पकाएको फलहरू, तरकारीहरू, मासु, जाम र जेलीहरू सहित सबै तयार गर्न र बचाउनको लागि सक्षम गर्दछ। क्यानिंग भनेको आर्थिक रूपमा टेबुलमा "मौसम बाहिर" खानेकुरा ल्याउने एक उत्तम तरिका हो। अब थोकमा तपाईले कम मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ र भविष्यको लागि सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ जब वस्तुहरू अभाव र अधिक महँगो हुन्छन्।
NOTE: यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यस मार्गनिर्देशनलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु भएको छ भनि सबै चरणहरू पछ्याउँदछन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि कि खाद्य यसको पौष्टिक मूल्य संरक्षण गर्न प्रक्रिया गरिएको छ र तपाईंको परिवारले उपभोगको लागि सुरक्षित छ। अनुचित क्यानिंगले गम्भीर स्वास्थ्य परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
प्रेशर क्यानिंग प्रक्रिया सबै खाद्य पदार्थहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र विशेष गरी थोरै एसिड समावेश गर्नेहरूका लागि। यसमा तरकारीहरू, मासु र समुद्री खाना समावेश छ।
क्यानिंग गर्दा त्यहाँ प्रयोगको लागि ठाउँ हुँदैन। खाना पकाउने समय, सामग्री र तापक्रम परिवर्तन गरेर खतरनाक र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। ठीक समय, तापक्रम र विधिमा निर्दिष्ट गरिएको प्रयोगले खानालाई हानिकारक ब्याक्टेरिया, मोल्ड र इन्जाइमहरूबाट जोगाउँदछ। एक नुस्खा मा धेरै समय थपेमा पोषक तत्व र स्वाद नष्ट हुन्छ।
खाद्य एन्जाइमहरूले मोल्ड र खमीरको बृद्धि गर्न सक्छ, जसले फलस्वरूप खाना खराब गर्दछ। यी एजेन्टहरू २१२ डिग्री तापक्रम प्राप्त गरेर नष्ट गर्न सकिन्छ भाप क्यान गर्ने विधिहरूको साथमा अन्य दूषित पदार्थहरू जस्तै साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, र क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बोटुलिज्मको कारण विकास हुन सक्छ। यी हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्नको लागि तापक्रम २212० the चाहिन्छ Can केवल प्रेशर क्यानिंग प्रक्रियाद्वारा प्रदान गरिएको।
खानामा एसिड सामग्री कम, बिगार्ने सम्भावना बढी र
प्रदूषण। फलफूलको रूपमा धेरै खानाहरू एसिडको उच्च हुन्छ जहाँ माईस, दुग्धजन्य उत्पादनहरू र समुद्री खाना जस्ता अन्य कम एसिडको स्तर हुन्छ। (तल चार्टहरू हेर्नुहोस्)
उचित दबाव क्यानिंगले बिग्रेको र दूषित हुने सम्भावना कम गर्दछ।
कच्चा प्याकिंग र हट प्याकिंग
ताजा खाद्य पदार्थमा हावा हुन्छ। क्यान्ड खानाको शेल्फ लाइफ क्यानिंग प्रक्रियाको क्रममा कती हावा हटाइएकोमा निर्भर गर्दछ। जति अधिक हवा हटाइन्छ, शेल्फको लामो जीवन हुन्छ।
कच्चा प्याकिंग ताजा तर अप्रमाणित खाद्य पदार्थहरू क्यानिंग गर्ने प्रक्रिया हो। प्रक्रियाले तिनीहरूका जारहरूमा ताजा फल जस्तो फडहरू निम्त्याउँछ। कच्चा प्याक भएका खाद्य पदार्थहरूले समयको साथ रंग पनि गुमाउँछन्। केही रेसिपीहरूमा कच्चा प्याकिंग उचित हुन सक्छ।
तातो प्याकिंग डिब्बाहरू खाने प्रक्रिया जुन उनीहरूको भाँडामा प्याक गर्नु अघि प्रि-पकाइएको थियो। यसले खानामा हावा घटाउँछ।
जे होस् प्रयोग विधिको, खानामा थप सबै तरल पदार्थ जहिले पनि उम्लने बिन्दुमा तताउनु पर्छ। यसले थप हावा हटाउनेछ, खाना संकुचन गर्दछ, फ्लोटिंग रोक्न र कडा सील सिर्जना गर्दछ।
उचाई र दबाव क्यानिंग
तापक्रम जुन पानीमा उमालिनेछ समुद्री सतहको सम्बन्धमा तपाईंको स्थानमा निर्भर गर्दछ। पावर प्रेशर कुकर एक्सएल समुद्री सतह माथि २,००० फिटको अधिकतम उचाईसम्म राम्रोसँग सञ्चालन गर्दछ। यस एकाईलाई २,००० फिटको उचाई माथि दबाबका लागि प्रयोग नगर्नुहोस्।
प्रक्रिया र समय र दबाव
तलको चार्टले तपाइँको पावर प्रेशर कुकर XL प्रयोग गरेर बिभिन्न खाद्य पदार्थहरूको लागि प्रशोधनको उचित समय र दबाव देखाउँदछ। क्यान बटनले दबाब सेट गर्दछ। K० को kPa सेटिंग ११..80 एलबीएस बराबर छ। PSI समुद्र सतह माथि २,००० फिट माथिको माथि, KPa setting० सेटिंगको साथ पावर प्रेशर कुकर एक्सएलले क्यानिंगका लागि सबै खाद्य पदार्थहरू सुरक्षित रूपमा प्रशोधन गर्न पर्याप्त दबाव र तातो उत्पादन गर्दछ।
अतिरिक्त कम एसिड फूडहरूको प्रशोधन गर्ने समय र विधिहरूको लागि, कृपया राष्ट्रीय खाद्य केन्द्र संरक्षण केन्द्र (http://www.uga.edu/unchfp/): वा तपाईंको स्थानीय काउन्टी विस्तार एजेन्टलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
सुरक्षित क्यानिंग टिप्स
अधिक पाकेको फल प्रयोग नगर्नुहोस्। खराब गुण भण्डारणको साथ गिराउँछ।
अधिक कम-एसिड सामग्री (प्याज, सेलरी, काली मिर्च, लसुन) नुस्खामा निर्दिष्ट नगर्नुहोस्। यो असुरक्षित उत्पादनको परिणाम हुन सक्छ।
मसलाको साथ अधिक मौसम नगर्नुहोस्। क्यान्डका सामानहरू असुरक्षित बनाउने ब्याक्टेरियाहरूमा मसला अधिक हुन्छ।
माखन वा बोसो नराख्नुहोस्। फ्याटले राम्रोसँग भण्डार गर्दैन र बिग्रेको दर बढाउन सक्दछ।
पातलो - कहिल्यै पीठो, स्टार्च, पास्ता, चामल वा जौ प्रयोग नगर्नुहोस्। केवल यूएसडीए को उपयोग सिफारिश खाली जेल Use।
एसिड (निम्बूको रस, भिनेगर वा साइट्रिक एसिड) लाई थप गर्नुहोस् विशेष गरी टमाटर उत्पादनहरूमा जब निर्देशनमा निर्देशन दिइन्छ। यदि आवश्यक छ भने, तपाई चिनी थपेर Tart स्वाद सन्तुलन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको पावर प्रेशर कुकर एक्सएल - - १ o ओज समायोजित गर्न डिजाइन गरिएको हो। (१ पिन्ट) चौडा मुख जारहरू प्रति क्यानिंग सत्र। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले मोहर लगाउने ढाडाहरूमा जारहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
खाली जारहरू तातो पानीमा हात धुनुहोस् वा हातले वा डिश वाशरमा साबुन प्रयोग गर्नुहोस्। राम्ररी कुल्नुहोस्। जारमा स्केल वा कडा-पानीका फिल्महरू सजिलैसँग जारमा धेरै घण्टा भिजाएर १ कप सिरका (percent प्रतिशत अम्लता) प्रति गैलन पानी प्रति घोलमा हटाउन सकिन्छ।
सेल्फ-सिलि l्ग ढक्कन (A) ले फ्लैट मेटल ढक्कन समावेश गर्दछ जुन धातु स्क्रू ब्यान्ड (बी) द्वारा प्रशोधनको क्रममा राखिएको छ। जब जारहरू प्रशोधन हुन्छन्, झाडको ग्यास्केट नरममा हावामा बाँधिएको मोहर बनाउँछ। राम्रो मोहर सुनिश्चित गर्नका लागि सावधानीपूर्वक निर्माताको निर्देशनहरूको अनुसरण गर्नुहोस् lणको तयारीको लागि। सबै धातु ढकहरूलाई ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्।
पुरानो, डन्टेड, वा विकृत ढक्कन वा सिल ग्यास्केटमा खाली ठाउँ वा अन्य त्रुटिहरूको साथ lids प्रयोग नगर्नुहोस्।
तपाईंलाई आवश्यक हुन सक्ने अतिरिक्त सामानहरू
पावर प्रेशर कुकर XL प्रेशर क्यानिंग प्रक्रिया
सुरू गर्नका लागि एक रिसाइप छान्नुहोस् जुन प्रि-टेस्ट र प्रेसर क्यानिंगको लागि अनुमोदित भएको छ।
जे होस् सामग्री भिन्न छ, सामान्यतया बोल्दै तपाइँ खाना प्रशोधन गर्दैहुनुहुन्छ यस गाइडमा प्रदर्शन गरिएको रूपमा
प्रि-टेस्ट प्रेसर क्यानिंग विधि प्रयोग गर्नुहोस्। केवल ताजा सामग्रीहरू छनौट गरेर, निर्देशनलाई खाना तयार गर्नुहोस्। तरकारीहरू र फलहरू ताजा उठाएको पाक्ने शिखरमा हुनुपर्दछ।
२2ओड्स भर्नुहोस्। FIN.16। मा देखाइएको स्तरमा सफा क्यानिंग जारहरू। कुनै पनि तरल फिज १.१ मा देखाइएको स्तर भन्दा बढी हुनुहुन्न, त्यसैले लगभग १ इन्चको शीर्षमा हेडस्पेस रहन्छ।
A. लचिलो ननपोरस स्प्याटुला प्रयोग गरी FIG.3 मा जस्तो कुनै फन्दामा परेको बुलबुले हटाउनको लागि खाना र जारको बीच बिस्तारै थिच्नुहोस्।
The. जारको माथि सफा ढक्कन राख्नुहोस् र त्यसपछि स्क्रू ब्यान्ड थप्नुहोस्। घडीको दिशामा फर्काउनुहोस् र हात कसलो ठाउँमा ठाँउमा FIG.4 मा।
NOTE: जारहरू प्रशोधन गरेपछि लिड्सलाई कहिल्यै पुन: व्यवस्थित नगर्नुहोस्। जारको रूपमा चिसो, सामग्री अनुबन्धित, एक उच्च शून्य गठन गर्न जारको बिरूद्ध दृढतामा स्वयं-सीलिंग ढक्कन तान्दै।
यदि स्क्रू ब्यान्डहरू धेरै ढीला छन् भने, तरल प्रक्रियाको क्रममा जारबाट उम्कन सक्छ, र सिलहरू असफल हुन सक्छ।
यदि स्क्रू ब्यान्डहरू धेरै कडा छ भने, हावा प्रशोधनको क्रममा बाहिर निस्कन सक्दैन, र भण्डारणको समयमा खाना डिस्कोलर हुनेछ। अधिक कसले गर्दा ढक्काहरू बकल गर्न र भाँडो भाँच्न सक्छ, विशेष गरी कच्चा प्याक गरिएको, दबाब प्रशोधन गरिएको खानाको साथ। भण्डार गरिएको जारहरूमा स्क्रू ब्यान्डहरू आवश्यक पर्दैन। जारहरू चिस्याएपछि तिनीहरूलाई हटाउनु पर्छ।
जब हटाइन्छ, धोइन्छ, सुकाइन्छ, र भण्डार गरिन्छ, स्क्रु ब्यान्डहरू धेरै पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि भण्डार गरिएको भाँडोमा छोडियो भने, तिनीहरूलाई हटाउन गाह्रो हुन्छ, प्राय: रस्ट, र फेरि राम्रोसँग कार्य नगर्न सक्छ।
Base. आधार एकाईमा भित्री भाँडो राख्नुहोस्। त्यसपछि भित्री भाडाको तल तार र्याक राख्नुहोस्। प्लेस भरियो, र्याकमा मोहर लगाइएको मोलहरू। एकाईले -5-१-4 ओजसम्म समात्नेछ। जार (अधिकतम)
Hot. जारमा तातो पानी राख्नुहोस् र भित्री भाँडोमा पानीको तह जारको छेउमा १/6 सम्म पुग्दैन। -1-१-4 ओज को लागी। जार यो पानी को बारे मा4कप हुनेछ। थोरै जारहरू प्रशोधन गर्दा थप पानी चाहिन्छ।
The. मालिकको म्यानुअल पढिसकेपछि, आधारमा लिड राख्नुहोस् र स्थानमा लक गर्नुहोस्। युनिटलाई भित्ते आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस्।
The. क्यानिंग / संरक्षण बटन चयन गर्नुहोस्। एकाई क्यानिंग कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित हुनेछ 8 KPa मा स्वत: प्रेस सेटिंग। अब तपाइँ तपाइँको नुस्खा को अनुसार कुक समय सेट गर्न आवश्यक छ।
The। जब क्यानिंग प्रक्रिया पूरा हुन्छ, रद्द गर्नुहोस् बटन चयन गर्नुहोस्। युनिट अनप्लग गर्नुहोस् र प्रेशर वाल्भलाई खुला स्थितिमा सेट गर्नुहोस्। एक पटक सबै स्टीम उम्के पछि सावधानीपूर्वक ढक्कन हटाउनुहोस्।
१० क्यानिंग ट Tन्गको प्रयोग गरेर तातो भाडामा हटाउनुहोस् र तिनीहरूलाई तातो प्रतिरोधी सतहमा राख्नुहोस् र कोठाको तापक्रममा चिसो हुन दिनुहोस्।
११. जारहरू राम्रोसँग चिसो हुँदा स्क्रू ब्यान्डहरू हटाउनुहोस्। ढकहरू जारमा कडा रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ र केन्द्रमा थिच्दा तिनीहरूसँग कुनै "दिने" वा स्प्रि motion्ग गति हुनु हुँदैन। यदि तिनीहरूले गरे भने, तपाईं भविष्यमा प्रयोगको लागि यस खाना सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्न। यो तुरुन्त पुन: प्रशोधित गर्नुपर्दछ वा फ्रिजमा राख्नुपर्दछ र केहि दिनहरूमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
१२. तयार पारिएका भाँडाहरू राख्नुहोस् ठिलो, सफा, सुक्खा वातावरणमा। उचित रूपमा प्रशोधन गरिएको खाना महीनाहरू र forतुहरूमा रहनेछ। जार, ढक्कन र स्क्रू ब्यान्डहरू पुन: प्रयोग गर्न योग्य छन्। पुनः प्रयोग गर्नु अघि क्षतिहरूको लागि सबै सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: पावर प्रेशर कुकर एक्सएल जब एक प्रेशर क्यानिंग उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ समुद्री सतहभन्दा माथि २,००० फिट भन्दा बढीको लागि प्रभावकारी अपरेटिंग क्षमता छैन।
निर्माताको सीमित वारेन्टी
निर्माताले चेतावनी दिन्छ कि तपाईंको पावर प्रेशर कुकर XL materials सामग्री र कारीगरीमा दोषमुक्त छ र यसको विकल्पमा, मर्मत वा कुनै दोषपूर्ण पावर प्रेशर कुकर XL लाई प्रतिस्थापन गर्दछ it जुन त्यसलाई फिर्ता गरियो। पावर प्रेशर कुकर XL का सबै भागहरू र कम्पोनेन्टहरू खरीदको मूल मितिबाट days० दिनको लागि ग्यारेन्टी गरिएको छ। यो वारेन्टी तल सेट सर्तहरू अनुसार मान्य छ।
सामान्य पोशाक र च्यात्नु यो ग्यारेन्टीले ढाक्दैन। यो वारेन्टी उपभोक्ताको प्रयोगमा मात्र लागू हुन्छ, र शून्य हुन्छ जब उत्पादन ब्यावसायिक वा संस्थागत सेटिंगमा प्रयोग हुन्छ।
वारेन्टी केवल मूल उपभोक्ता खरीददारमा मात्र विस्तार हुन्छ र ट्रान्सफरेबल हुँदैन। थप रूपमा, खरीदको प्रमाण प्रदर्शन गरिनु पर्छ। यो वारेन्टी शून्य छ यदि उत्पादन दुर्घटना, दुरुपयोग, दुरुपयोग, अनुचित मर्मत वा मर्मत, वा अनधिकृत संशोधन को अधीनमा छ।
यो सीमित वारंटी केवल लिखित वा व्यक्त वारंटी निर्माता द्वारा दिइएको हो। यस उत्पादनमा विशेष उद्देश्यका लागि व्यापारिकता वा फिटनेसको कुनै निहित वारेन्टी यस वारंटीको अवधिमा सीमित छ। केही राज्यहरूले कति लामो समय सम्म निहित वारेन्टीमा सीमितताहरू अनुमति दिँदैन, त्यसैले माथिको सीमा तपाईंमा लागू हुँदैन।
उत्पादनको मर्मत वा प्रतिस्थापन (वा, यदि मर्मत वा प्रतिस्थापन सम्भव छैन भने, खरीद मूल्यको फिर्ती) यस वारेन्टी अन्तर्गत उपभोक्ताको एक मात्र उपाय हो। निर्माता यस वारंटी वा यस उत्पादन मा कुनै निहित वारेन्टी को उल्लंघन को लागी कुनै दुर्घटनात्मक वा परिणामी क्षतिको लागि जिम्मेवार हुनेछैन। केही राज्यहरूले प्रासंगिक वा एन्सेक्वेन्टल क्षतिको बहिष्करण वा सीमितताको अनुमति दिदैन, त्यसैले माथिको सीमा वा बहिष्कार तपाईंलाई लागू हुँदैन।
यो वारेन्टीले तपाईंलाई निर्दिष्ट कानुनी अधिकार दिन्छ, र तपाईंसँग अन्य अधिकारहरू पनि हुन सक्दछ जुन राज्य-राज्य अनुसार फरक फरक हुन्छ।
वारेन्टी मर्मत वा प्रतिस्थापनको लागि प्रक्रिया:
यदि वारेन्टी सेवा आवश्यक छ भने, मूल खरीदारले उत्पादन सुरक्षित रूपमा प्याक गर्नु पर्छ र यसलाई दोषको विवरण, खरीदको प्रमाण, र address २..24.99 for को लागि चेक वा मनी अर्डरको साथ भुक्तान पोष्ट पठाउनुहोस् र फिर्ता पोष्ट कभर गर्न र निम्न ठेगानामा ह्यान्डलिंग गर्न:
पावर प्रेशर कुकर XL ™, PO Box 3007, Walingford, CT 06492।
हामी हाम्रो को डिजाइन र गुणवत्ता मा धेरै गर्व छ
यो उत्पादन उच्च मानकों मा निर्मित गरिएको छ। यदि तपाईंसँग कुनै समस्या छ भने, हाम्रो मैत्री ग्राहक सेवा स्टाफ तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छ।
उर्जा AirFryer XL उपयोगकर्ता पुस्तिका पावर एयरफ्रायर XL प्रयोगकर्ता म्यानुअल महत्वपूर्ण: पावर एयरफ्रायर XLTM वारेन्टी ...
क्रक पट Q क्यूटी एक्सप्रेस क्रोक एक्सएल मल्टी कुकर मालिकको म्यानुअल क्रक पट Q क्यूटी एक्सप्रेस क्रक एक्सएल मल्टी कुकर मालिकको म्यानुअल ...
DUO NOVA बहु प्रयोग प्रेस कुकर उपयोगकर्ता पुस्तिका DUOTM NOVA बहु-प्रयोग प्रेशर कुकर https://instantpot.com/portLive_entries/duo-nova/ सुरु गाइड पूर्ण गरीरहेको छ ...
तत्काल भाँडो DUO बहु प्रयोग दबाव कुकर उपयोगकर्ता पुस्तिका DUOTM मल्टि-प्रयोग प्रेशर कुकर सुरु गर्दै गाइड https://instantpot.com/portLive-item/duo-6-quart/ पूर्ण म्यानुअल ...
पावर XL ग्रिल एयर Fryer कम्बो निर्देश पुस्तिका पावर XL ग्रिल एयर Fryer कम्बो निर्देश पुस्तिका - अनुकूलित ...
सेज फास्ट स्लो प्रो BPR700 प्रेशर कुकर उपयोगकर्ता पुस्तिका सेज फास्ट स्लो प्रो BPR700 प्रेशर कुकर प्रयोगकर्ता म्यानुअल ...
अक्टोबर 2, 2020 अक्टोबर 2, 2020 पोस्टपावरटैग: पावर, प्रेशर कुकर XL
उर्जा AirFryer XL उपयोगकर्ता पुस्तिका
लौरा labrake भन्छन्:
डिसेम्बर 26, 2020 11 मा: 51 बजे
म समुद्री लेभलबाट a१०० हुँ
के म अझै पनी 4- १ o ओज जारहरू गर्न सक्छु यदि मँ धेरै समय बढाउँछु? उदाहरणका लागि भेडाले १० स्ट्यान्ड or 16 वा मध्य सेटिंग भने। के म यसलाई तेस्रोमा सेट गर्न सक्छु वा हाम्रो समुद्री सतहमा राम्रो सेटिंग
मैले यो क्यानिंगको लागि प्राप्त गरें र अब यसले समुद्रको सतहबाट २००० फिट भन्दा बढि खिच्न भन्न सक्छ!
डेभिड मेंडोजा भन्छन्:
जनवरी 8, 2021 1 मा: 46 बजे
भित्री ढक्कनमा झर्काइएको धातु आस्तीन मेरो पीपीसी 770० मा आइसकेको छ। ढक्कले ठीक समयमा सील हुँदैन र लक गर्ने बित्तिकै हिंड्दछ।
नर्मन वेस्ले बाउडेन भन्छन्:
मार्च 29, 2021 11 मा: 27 बजे
के म मेरो पावर प्रेशर कुकर एक्सएलको लागि म्यान्युएल मद्दत गर्न सक्छु?
मार्च 30, 20215मा: 38 हूँ
डाउनलोड र प्रिन्ट गर्नुहोस्: https://manuals.plus/wp-content/uploads/2020/10/Power-Pressure-Cooker-XL-Manual.pdf
जोइला हर्नान्डेज भन्छन्:
अप्रिल 26, 20215मा: 52 हूँ
क्यासरोललाई कसरी सफा गर्ने, जब केहि खानामा यससँग टाँसिएको छ।
धन्यबाद, म तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि कुर्दै छु। Zoila
Como limpiar la cazuela, cuando se le ha pegado algun alimento।
Gracias, espero su respuesta। Zoila
जुली गुटेरेज भन्छन्:
मई 6, 20219मा: 13 बजे
म पावर एक्सएल प्रेशर कुकरमा of को वाट्स जान्न चाहान्छु।
मई 6, 20219मा: 21 बजे
यो तपाईंको मोडेल नम्बरमा निर्भर हुन सक्छ, यो सन्दर्भ हेर्नुहोस्: https://manuals.plus/power/power-pressure-cooker-xl-user-manual/attachment/unit-specifications
मार्था गार्सिया भन्छन्:
मई 15, 20212मा: 54 हूँ
शुभ रात्री, मेरो xl भाँडो सकियो तर कुनै प्रकार्य सक्रिय छैन, म के गर्न सक्छु
मैले कोलम्बियाबाट लेखेको थिएँ
बुएनास नाचेस, माई ओला एक्सएल प्रिन्डे पेरो से ई एक्टिवा निंगुना फ्युन्सिन, क्यू प्यूइटो हेकर
Escribí desde कोलम्बिया
मई 18, 20214मा: 45 बजे
म खाना पकाउने समय कहाँ पाउन सक्छु? म तिनीहरूलाई कहिँ फेला पार्न सक्दिन!
डोन्डे इन्क्वेन्ट्रो लस टाईम्पोस डे कोक्सियन ?? कुनै लॉस encuentro पोर ningun लाडो!
डियान पार्कर भन्छन्:
मई 23, 2021 12 मा: 04 हूँ
जे भए पनि बिपिंग मौन गर्न? यसले मेरो कुकुरलाई घबराउँछ
Zivka nikolic भन्छन्:
जुन 6, 20219मा: 21 बजे
मैले यो बिजुली स्टोभ किनेको छु, यो एक भाँडो हो, पहिले यो सुपर थियो, अब यो सामान्यतया नलहरु तातो गर्दैन, सबै कुरा सही छ, यो अब गर्मी छैन, म के गर्न सक्छु?
Kupila sam elektricni ovaj stednjak to jes lonac prvo je bio supre sad u opste ne greje tastaura sve ispravno samo vise ne greje sta da radim samo blinkaane zagrejava u opste hranu nekuva
जुलाई 24, 20212मा: 03 बजे
के म प्रेसर पकाउने विधि र पावर क्यानिंग विधि पुस्तक डाउनलोड गर्न सक्छु? मैले तिनीहरूलाई पक्रें तर हरायो ... अ lost्ग्रेजी संस्करणहरू जे भए पनि।
Candi Biever भन्छन्:
जुलाई 26, 20216मा: 19 बजे
नमस्ते, म खाना पकाउन चाहन्छु, सक्नुहुन्न, घन तरकारीहरू, जस्तै मीठो आलु, बीट, गाजर। म तिनीहरूलाई पकाउन चाहान्छु तिनीहरू नरम नभएसम्म, तर नकिलो छैन। हामी उनीहरूलाई खाजाको लागि नरम खान चाहन्छौं, उनीहरूबाट अरू केही नबनाऊ। म्यानुअलमा, चार्टमा यसले आलु र बीटहरू देखाउँदछ, तर तरकारीका लागि कुनै सेटिंग छैन। मैले माछा सेटिंगमा केहि गरेँ, तर मैले यो दुई पटक गर्नुपर्‍यो। तल पानीको एक कप र तार र्याकको साथ।
अगस्ट 9, 2021 10 मा: 34 बजे
मेरो समय परिवर्तन हुनेछैन, के म पहिले निर्माण को लागी दबाव को लागी पर्खनु पर्छ। पूर्वनिर्धारित दस मिनेट छ। मलाई २० चाहिन्छ। चावल बटन पकाउने समय बटन पनि हो?
अगस्ट 25, 2021 8 मा: 30 बजे
कसरी cuvette यो deculase प्रतिस्थापन गर्न को लागी। अब म यसलाई प्रयोग गर्न सक्दिन।
टिप्पणी remplacer la cuvette elle est déculase.Je ne peux plus m'en servir।
क्याथी जॉनसन भन्छन्:
अगस्ट 30, 20212मा: 45 हूँ
नमस्ते मैले २०१l मा xl किनेको छु। धेरै बिरामी पर्यो। सारियो र अब क्यानर को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ तर डिब्बाबंद किताब गलत छ। म कसरी अर्को पाउँछु?
अगस्ट 30, 20215मा: 35 बजे
सेप्टेम्बर 7, 20217मा: 06 हूँ
नमस्ते, मेरो भाँडो मा चालू हुन्छ जब म यसलाई वर्तमान मा जोड्छु, तर यो तातो छैन र म धेरै दुखी छु, मैले पनी अर्को किन्ने योजना बनाएको थिएँ, तर यो दुई बर्ष सम्म चलेको छैन र यो अब तातो छैन!
यो मलाई कति दुखी बनाउँछ, मलाई मतलब थिएन कि भित्र यसको कालो रंग हराएको थियो, सायद हामीले यसलाई हाम्रो खाना संग खाएका थियौं, तर ती सबै धेरै स्वादिष्ट थिए।
कृपया सहयोग गर्नुहोस्!!! म उसलाई फेरि न्यानो बनाउन के गर्न सक्छु?
र के यो हो कि उनीहरु यति थोरै रहन्छन्? के यो कसैलाई भएको छ? उहाँ मात्र १ १/२ बर्षको हुनुहुन्छ, अब छैन र ऊ पहिले नै भाँचिएको छ
Hola, mi olla enciende al conectarlaala corriente, pero no calienta y me tiene muy triste, hasta había planificado comprar otra, pero no ha durado ni dos años y ya no calienta !!!
Que tristeza me da, no me importaba que la parte आन्तरिक había perdido el color negro, quizás nos lo comimos con las las comidas, pero esteban muy sabrosas todas।
कृपया, आयुदा !!! Que puedo hacerle para que caliente otra vez?
Y es que duran tan poco? Le ha pasado éstoaalguien? S tlo tiene 1 1/2 año, no más y ya se rompió
Saramonic Blink500 प्रो Ultracompact २.४ GHz दोहोरो च्यानल वायरलेस माइक्रोफोन प्रयोगकर्ता पुस्तिका
TAOTRONICS TT-SK018 मिनी ध्वनि पट्टी प्रयोगकर्ता गाइड
ANKER A2561 PowerWave चुम्बकीय 2-मा -1 स्ट्यान्ड प्रयोगकर्ता गाइड
हनीवेल घर C7189R1004 वायरलेस इनडोर सेंसर निर्देश पुस्तिका
RYCO RCA329M केबिन एयर फिल्टर N99 MicroShield निर्देश